Muqdisho oo dadka la baarayo iyo walaaca waaridiinta | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Muqdisho oo dadka la baarayo iyo walaaca waaridiinta
Muqdisho oo dadka la baarayo iyo walaaca waaridiinta
Arrintaan ayaa timid ka dib markii dawladda Soomaaliya oo kaashaneysa ciidamadda nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ay hawlgelo balaaran kula dhaqaaqeen xaafadaha ay magaaladdu ka kooban tahay kuwaasoo ay ciidamaddu kusoo qabqabteen dad iyo gaadiid sida la sheegayo lala damacsanaa in lagu weeraro xarumaha muhiimka ah ee magaaladda Muqdisho.
Sida ay dad goobjoogayaal ah ugu warameen Xaqiiqa Times shaqsiyaad badan oo lagu tuhmayo in ay gacan ku lahaayeen qalqal gelinta Muqdisho ayaa iminka isaga baxaya magaaladda ka dib markay waayeen gabaadyo ay horey uga soo abaabulijireen falalkooda guran, mana ahan oo kaliya hawlgelka waxa wada ciidamadda ee waxaa ku biiray shacabka oo haatan ay si weyn u taabatay dhibaatadda amni xumo ee ku xeeran deegaanadda ay ku nool yihiin.
Hawlgelka socda ayey saraakiisha dawladdu waxay sheegayaan in ay beegsanayaan goobaha lagu tuhmayo waxyaabaha amniga iyo kala danbeynta khatarta ku ah sida walxaha qaraxyada loo addeegsado, hubka, rasaasta, direyska ciidamadda iyo agabyo kale oo ay weli si aan sharci aheyn gacanta ugu jira shacabka.
Marka laga soo tago baaritaanka guryaha iyo gaadiidka ayey ciidamaddu waxay beegsanayaan baro kasta oo la tuhmo kuwaasoo ay kasoo faagayaan shixnado hub iyo rasaas isugu jira oo horey loogu sii keydiyay balse xukuumaddu ay ka warheshay markii ay dadweynuhu digniino gaarsiiyeen. Gooabahaasi waxaa ka mid ah garaashyo iyo xarumo kale oo sida la tuhmayo lagu soo hagaajiyo gaadiidka qaraxyadda lagu geysto oo aanan horey looga shakisneyn iyo gawaaridda shirqooladda lagu fuliyo ee la hareer dhigo waddooyinka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa ku goodinaya in hawlgelkaasi wadajirka ah uusan hakan doonin illaa inta laga gun gaarayo ujeedka laga leeyahay. Dhawaan ayey ahayd markii ciidanka nabad suggidda iyo kuwa boolisku ay weerareen hoyga ganacsade Cabdi Ileys halkaasoo baaritaan ka dib ay kula soo wareegeen hub iyo rasaas iyagoo horeyna ula wareegay hub ku keydsanaa garaash uu lahaa Cusmaan Caato. Sidoo kale waxaa la qabqabtay daraasiin dad ah oo baaritaano ay ku wadaan laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya.
Sidoo kale hawlgelka ayaa lagu wadaa in lagu sii baahiyo deegaanadda ka baxsan magaaladda sida Afgooye iyo degmadda Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Dhanka kale waaridiinta ayaa walaac aad u xoogan ka qaba in hawlgelkaasi waqtiga lagu soo beegay qudhooda lala maagan yahay ka dib bayaankii kasoo baxay maxkadda ciidamadda ee shaaca looga qaaday in shaki la’aan la isla toogan doono waaridiinta iyo caruurtooda lagu helo inay gacan saar la leeyihiin xarakadda Shabaab ee Soomaaliya. Hadalka waxaa warbaahinta u sheegay guddoomiyaha maxkamaddaasi gaashaanle sare Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare xilli xukun toogasho lagu fulinayay saddex dhallinyaro ahaa.
Previous articleXasan Sheekh oo ka qeybgalaya shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka
Next articleDawladdu kama gorgortameyso boobka baddeeda